Abaal marin la siiyo laba mutadawiciin ah oo muddo dheer ahaa - Cunnooyinka Taayirada
Abaalmarin laba mutadawiciin muddo dheer ah
Markii aan bilowno, dib ugama noqonayno. ”
Taasi waxay ku soo koobeysaa Rod Jenkins markay tahay sida isaga iyo xaaskiisa Marge u shaqeeyaan.
Markay tahay guurka, waxay u ahayd 68 sano iyaga.
Waxay ku raaxaystaan kaamam - si aad ah ayay madaxooda u hoos dhigteen 47 gobol oo kala duwan, iyo dhammaan marka laga reebo hal gobol oo Kanadiya ah. Midka maqan waa Gobollada Waqooyi-Galbeed haddii aad weydiinayso.
Rod xubin Libaax Naadi ah… 50 sano.
Cunnooyinka jilicsan ee lowska 'Marge' oo qaata 1 saac digsi kasta, kaliya si loo sameeyo 4 kiish oo dhexdhexaad ah? Iyadu ma dhammaan ilaa ay ka filan tahay dhammaan asxaabteeda iyo qoyskeeda, iyo in badan oo ay ku iibiso iibka kaniisadda.
Nidaamkaas weyn ee waxyaabaha iyaga loogu talagalay, Rod iyo Marge ma noqonin Cunto-bixinno tabaruceyaal ah taasi dheer. Laakiin inteena kale, waxay ahayd waxqabad aad uwanaagsan.
Joanne Larsen waxay sheegtay inaysan hubin goorta ay Rod iyo Marge bilaabeen inay wax keenaan, laakiin halkaas ayey joogeen markii ay bilawday inay noqoto isku-duwaha barnaamijka Southwest Minneapolis Meals on Wheels program 20 sano ka hor. Rod iyo Marge si fiican uma soo xusuusan karaan markay bilaabeen, laakiin waxay ahayd wax yar uun ka dib markay hawlgab noqdeen qiyaastii 25 sano ka hor.
Marge, 88, iyo Rod, 87, wali way sii xoogaysanayaan, laakiin waxay dhawaan go’aansadeen inay furaan furayaashooda, si loo yiraahdo. Waxay ku sameeyeen Cunnooyinkoodii ugu dambeeyay ee gaarsiinta Wheels bishii Maarso.
Uma wareegaan si dhib yar sidii hore, markaa waxay raadinayaan fursado kale oo iskaa wax u qabso ah oo aan ku lug lahayn wadista badan. Si loo sharfo iyaga sannado badan oo ay shaqeynayeen, waxaan la fadhiisannay Jenkinses si aan wax yar uga sii baranno iyaga.
Sida ay ku bilaabeen keenista cuntada: Saaxiibkood kaniisaddooda ayaa ka codsaday inay raacaan waddo - ka dibna sida ay u sheegaan, si qarsoodi ah ayaa loo waayey maalintaas. Waxay ku sifeeyeen inay ahayd ciyaar dabeecad wanaagsan oo soo noqnoqotay.
Maxay ugu raaxaystaan: "Waxay caawineysaa qof u baahan caawimaad waana awoodnay inaan qabanno," ayuu yiri Rod. Marge waxay sheegaysaa inay ku aragtay wejiyada ay ku yaalliin marinka umulintu wax ay ku riyaaqday Waxay la qabsadeen 6-dii toddobaadba mar, ayay tidhi.
Sidee ay u kulmeen: Kooxda dhalinyarada ee Kaniisada Hennepin Avenue United Methodist. Waxay yiraahdeen waxaa jiray nasasho 2-bilood ah mar uun oo la xiriirta Marge aabihiis oo aan ku qanacsaneyn Rod isagoo adeegsanaya Harley oo ah habka koowaad ee lagu kaxeeyo gabadhiisa. Wuxuu ka takhalustay Harley, wax shalaay ahna ma leh.
Sidee Rod ula kulmay gabadhiisa koowaad: Taasi ma imaanin ilaa ay 6 bilood jirtay. Rod ayaa la geeyay Dagaalkii Kuuriya markii ay dhalatay, waxaana kulankoodii lagu qabtay bogga hore ee Minneapolis Tribune. Hada, waxay leeyihiin 3 gabdhood, 7 ayeeyoo, 11 ayeeyo oo ay ayeeyo u tahay iyo 2 ayeeyo oo ay ayeeyo u tahay.
Sirta ku jirta sanadaha farxada leh ee guurka: "Waxaan si fiican uga wada hadalnaa wax walba, ka dibna waxaan u sameyneynaa sidii iyada la rabay, laakiin waxaan helayaa labadii eray ee ugu dambeeyay," ayuu yiri Rod. "Kuwaasina waa, 'Haa, gacaliye.' Kaftanka marka laga reebo, Marge wuxuu leeyahay isgaarsiinta iyo tanaasulku waa waxa ay ku saabsan tahay.
Waxaa u waxyooday Rod iyo Marge? Marwalba waxaan ubaahanahay tabaruceyaal gaarsiinta badan. Baro wax badan oo ku saabsan iskaa wax u qabso Cuntooyinka Lugaha Lugood.